UPDATE: Madaxweynihii hore Somaliya Xasan Sheekh oo si adag uga hadlay xayiraadii lagu sameeyay garoonka Kismaayo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Madaxweynihii hore Somaliya Xasan Sheekh oo si adag uga hadlay xayiraadii...
Muqdisho (Halqaran.com) – Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay Xayiraada dowladda Soomaaliya ay saartay garoonka Magaalada Kismaayo oo maalmihii ugu dambeeyay Sababay dhibaatooyin bulshada gaaray.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa uu sheegay in Musiibo weyn ay tahay in dowladda dhexe ee Soomaaliya hub ahaan ay u adeegsanayso maamulka Hawada Soomaaliya, islamarkaana dad Shacab ah la cunaqabateeyay.
Qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo geliyay ayuu ku sheegay in Soomaaliya ay muddo 30 sano ah sugeysay inay gacanta ku dhigto maamulka Hawadeeda, islamarkaana hada si qaldan loo isticmaalaayo.
”Waa xaalad murugo leh in dowladdu u isticmaasho maareynta hawada sidii hub siyaasadeed oo saameyn culus ku yeelan kara xasilloonida siyaasadeed iyo midnimada dalka”, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Hadalka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yimid ka dib markii maanta Garoonka Muqdisho loo diiday in uu ka dhoofo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif, sidoo kalena dowladda dhexe ee Soomaaliya ay xoojisay xayiraada saaran Garoonka Kismaayo.
Madaxweynihii hore Somaliya Xasan Sheekh
xayiraadii lagu sameeyay garoonka Kismaayo